उद्योगीलाई वाणिज्य विभागको प्रश्न-किन बढ्यो खाने तेलको मूल्य ? – Kantipur Np
उद्योगीलाई वाणिज्य विभागको प्रश्न-किन बढ्यो खाने तेलको मूल्य ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २०, २०७८ समय: १९:१६:१२
२० भदौ, काठमाडौं
खाने तेलमा भएको मूल्य वृद्धिबारे वाणिज्य विभागले तेल उत्पादकहरुसँग छलफल गरेको छ । शुक्रबार विभागमा भएको छलफलमा उद्योगीसँग मागिएको ६ प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नमिलेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए ।
विभागमा परेको उजुरी, विभागले बजारमा गरेको अनुगमन र सञ्चार माध्यममा आएका मूल्य वृद्धिका गुनासाबारे उद्योगीहरुसँग मागेको जवाफ ठोस नभएको उनले बताए । ‘तेलको मूल्य वृद्धिबारे हामीले उद्योगीसँग छलफल गर्‍यौं । उहाँहरुको भनाइ परम्परागत नै थियो ।
मूल्य वृद्धिबारेको प्रश्नमा उद्योगीहरु नाजवाफ रहे,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने । एक वर्षको अवधिमा तेलको मूल्य झण्डै दोब्बर वृद्धि भएको तर त्यसमा आफ्नो भूमिका नभएको दाबी उद्योगीहरुले गरेको विभागले जनाएको छ ।
छलफलमा नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघ आबद्ध १९ तेल उत्पादक कम्पनीका सञ्चालक उपस्थित थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को कात्तिकदेखि बढ्न शुरु भएको तेलको मूल्य बारे अचाक्ली बिरोध पछि जेठमा मूल्य घटाएको दाबी विज्ञप्तिमार्फत तेल उद्योगीले गरेका थिए ।
तर, काटुर्नमा मूल्य घटाए जस्तो गरेर प्याकेटमा भने उपभोक्तालाई पुरानै मूल्यमा तेल बेचिएकोबारे विभागले उद्योगीसँग धारणा मागेको थियो ।
यस्तै अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) कम राखेर खुद्रा बिक्रेतालाई बिल बिजक बिनै तेल बिक्री गरेको गुनासोबारे पनि विभागले धारणा मागेको थियो ।
भारतीय बजारमा अत्याधिक निर्यात गर्दा मागअनुसारको स्वदेशी खपत धान्ने तेल नेपालमा बिक्री किन नगरेको भनि उद्योगीलाई विभागका महानिर्देशक प्रकास पौडेलले राखेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको दिनमै नेपालमा मूल्य बढाउने र घटेको दिनमा तेलको मूल्य नघटाने उद्योगीको स्वभावबारे पनि उनले प्रश्न गरेका थिए ।
तेलको गुणस्तरबारे प्रष्ट पार्न पनि उद्योगीलाई भनेको विभाग स्रोतले बतायो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तेल उद्योगहरुमध्ये अधिकांसले स्वदेशी बजारमा बिक्री नगरी निर्यात गर्ने गरेको र सो कार्यले नेपाली बजारमा आभवसँगै मूल्य बढेको भन्दै प्रष्ट्याउन विभागले उद्योगीसँग माग गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
विभागमा करिब तीन घण्टा चलेको छलफलमा उद्योगीहरुले तेलको मूल्य वृद्धिमा नेपाली उद्योगको हात नभएको मात्रै जिकिर गरेको विभाग स्रोतले बतायो ।
तेलको मूल्य बढ्दा सरकारको भ्याट पनि बढेको भन्दै उद्योगीले यसमा विवाद झिक्न जरुरी नभएको बताएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
एमआपी मूल्यको सानातिना समस्या डिलर तथा खुद्रा बिक्रेताका कारण आएकोभन्दै पन्छिएका उद्योगीहरुले तेलको मूल्य बढेको तथा भारत निकासी गरेको विषय सञ्चार माध्यामलाई मन नपरेको धारणा राखेका थिए ।
विभागको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेका कारण यहाँ पनि मूल्य बढेको दाबी गरेका थिए ।
स्वदेशी उद्योगका कारण मूल्य नबढेको भन्दै यसबारे नेपाली मिडियाले कुरा नबुझेको धारणा बैठकमा उनले राखेको विभाग स्रोतले बतायो । मूल्य वृद्धिबारे राखेको सबै जिज्ञासामा जवाफ दिन नसकेका उद्योगीहरुसँग विभागले तेलको कच्चा पदार्थ आयातको विवरण लिएको र त्यसमा उद्योगीले तोकेको मूल्य हेरेर थप अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरिएको विभाग स्रोतले बतायो ।
Last Updated on: September 5th, 2021 at 7:16 pm